सुशान्तकी प्रेमिका रियालाई बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की – Enepali News
July 16, 2020 232
काठमाडौं । अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युपछि बलिउडमा खैलाबैला मच्चिएको छ। सुशान्त ‘नेपोटिजम’को शिकार भएके भन्दै भारतमा विभिन्न निर्माता तथा कलाकारमाथि मानिसहरु खनिइरहेका छन्।
सुशान्तकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीले विभिन्न प्रकारको गाली र धम्की पाइरहेकी छिन् । उनलाई विभिन्न ठाउँबाट गाली तथा धम्कीहरु आएको बताइएको छ। यसैबीच रियाले एउटा यस्तो मेसेजको स्क्रिनसट सोसल मिडियामा पोस्ट गरेकी छिन् जसमा उनलाई बलात्कार र हत्या गरिदिने धम्की दिइएको छ ।
रियाले स्क्रिनसट शेयर गर्दै लेखेकी छिन्, ‘मलाई गोल्ड डिगर भनियो… म चुप बसेँ । मलाई हत्यारा भनियो… म चुप बसेँ… मेरो चरित्रमाथि औंला उठाइयो तर पनि म चुप बसेँ । तर म चुप बस्दा तिमीले मलाई मैले आत्महत्या नगरेको खण्डमा मेरो बलात्कार र हत्या गराइदिने भन्ने अधिकार तिमीलाई कसले दियो ? तिमीले जे भनिरहेकी छौं, त्यसको गम्भीरताबारे अलिकति पनि महसुस भएको छ ? यो अपराध हो र काूननी रुपमा कसैलाई पनि यसरी प्रताडित गरिनु हुँदैन ।’
रियाले यो पोस्टसहित साइबर क्राइम हेल्पलाइनलाई ट्याग गरेर कारवाही गर्नका लागि पनि आग्रह गरेकी छिन् । सुशान्तको आत्महत्याको विषयमा रियासँग प्रहरीले ११ घण्टासम्म सोधपुछ गरेको थियो । उनले बिहिबार ट्वीट गर्दै यो केस सीबीआईलाई अनुसन्धान गर्ने दिनुपर्ने माग गरेकी छन्।
Prevसिन्धुपाल्चोकमा पहिरोले फेरि घर बगायो, एकै परिवारका पाँच बेपत्ता
Nextचीनबाट हुनसक्ने सम्भावित आक्रमण रोक्न ताइवानले गर्‍यो युद्धाभ्यास
कोरोनाबाट अमेरिकामा एकैदिन एक हजार भन्दा बढीको मृत्यु